चिनियाँ वेल्डिंग Inverters: मूल्याङ्कन र समीक्षा
आज, निर्माता को एक ठूलो संख्या विशेषताहरु को एक किसिम संग वेल्डिंग Inverters उत्पादन। यो प्रविधी व्यापक घरेलू र औद्योगिक उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
पहिलो Inverters अन्तिम शताब्दीको 70s मा देखा छन्। आफ्नो विशिष्ठ सुविधा शक्ति रूपान्तरण सिस्टम को प्रकारको छ। यो उल्टाउने भनिन्छ। को प्रस्तुत उपकरण प्रकाश र प्रयोगमा सहज छ।
आज धेरै लोकप्रिय चिनियाँ वेल्डिंग Inverters आनन्द। आफ्नो लागत ग्राहक स्वीकार्य छ र गुणस्तर कहिलेकाहीं छैन प्रसिद्ध ब्रान्डहरु गर्न कमसल छ। एशियाली उत्पादन को सबै भन्दा राम्रो उपकरण कसरी चयन गर्न, यो तल विस्तृत छलफल गरिनेछ।
एक peculiar वर्तमान रूपान्तरण सिद्धान्त वेल्डिंग उपकरण (पलटनेवाला) अलग छ। चिनियाँ, युरोपेली, यस्तो उपकरण बनाउन मा घरेलू उत्पादकहरु को प्रविधी को नै सिद्धान्त प्रयोग भएको छ।
सामान्य घरायसी नेटवर्क देखि बिजुली पलटनेवाला rectifier आपूर्ति गरिएको छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष वर्तमान मा परिवर्तित छ। पछि यो परिवर्तन फेरि बिजुली उत्पादन गर्छ। अब यो एक उच्च आवृत्ति (50 kHz) छ। यसबाहेक, पलटनेवाला एकाइ एसी भोल्टेज lowering छ। यो नै समय मा हालको बढ्छ तर 90 वी गर्न खस्छ। यो बिजुली वेल्डिंग लागि उपयुक्त छ।
उपभोक्ताहरु अनुसार, चिनियाँ उत्पादन वेल्डिंग पलटनेवाला एक कम्प्याक्ट आकार, सजिलो छ। यसलाई प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ। सही विकल्प, मास्टर प्रासंगिक आवश्यकताहरु बनाउन, यो उपकरण को केही सुविधाहरू ध्यान आवश्यक छ।
वेल्डिंग Inverters छनौट चिनियाँ, तपाईं उपकरण र यसको स्कोप प्रकार ध्यान गर्नु पर्छ। उपकरण उद्देश्य अनुसार, त्यहाँ उपकरणहरू तीन मुख्य वर्गहरू छन्।
लागि घरेलू प्रयोग 120-200 ए को हालको कुल संग मोडेल प्राप्त गर्न पर्याप्त छ यी यन्त्रहरू काम एउटा सानो रकम प्रदर्शन गर्न सक्षम छन्। यस मामला मा, मास्टर 5-8 मिनेट पछि लामो विश्रामहरू बनाउनु पर्दछ। पलटनेवाला सञ्चालन।
पाइप वेल्ड गर्न आवश्यक जहाँ ढल, पानी संचार, को मरम्मत को लागि, तपाईं प्राप्त गर्नुपर्छ व्यावसायिक-ग्रेड उपकरण। यो अवरोध बिना उच्च गुणवत्ता वेल्डिंग प्रदान एकदम लामो समय को लागि काम गर्न सक्षम छ। यस मामला मा, पलटनेवाला हालको 200-300 ए बाट संचालित
बेचिएको औद्योगिक ग्रेड उपकरणहरू ठूलो निर्माण। तिनीहरूले 24 घण्टा अवरोध बिना काम गर्न सक्षम छन्। उपकरण जस्तै लागि वेल्डिंग वर्तमान 500 ए सेट गरिएको छ
घरेलू पलटनेवाला को चयन
त्यहाँ जब वेल्डिंग मिसिन छनौट ध्यान गर्न आवश्यक छ कि धेरै कुञ्जी पक्षहरू छन्। चिनियाँ बनाएको पलटनेवाला चिरपरिचित ब्रान्ड गर्नुपर्छ। यो उच्च गुणवत्ता उपकरण सुनिश्चित गर्दछ।
पलटनेवाला संचालित जो वर्तमान, वेल्डिंग, एक निश्चित समय भित्र उपकरण को सामान्य संचालन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो संग सञ्चालन वर्तमान सूचक (160 भन्दा कम एक छैन) कम्तिमा 30% उपकरण शक्ति वास्तविक headroom प्राप्त गर्न राम्रो छ।
घरपरिवारको प्रकार पलटनेवाला को स्थिर सञ्चालन घरहरू मा नेटवर्क 220 वी जडान गरेर हासिल फ्लैट शक्ति प्रसारण लाइन सानो भोल्टेज उतार चढाव विशेषता द्वारा गर्न सकिन्छ (दुवै दिशामा 15% सम्म) छ। यी सुविधाहरू संवेदनशील नेटवर्क Inverters छैनन्। तर यदि भोल्टेज तरंग 15% को सीमा नाघ्यो, आपूर्ति वर्तमान को समान सुविधाहरू विरुद्ध सुरक्षा संग उपकरण प्राप्त गर्नुपर्छ।
ग्राहकबाट प्रतिक्रिया आधारित यो सस्ता उपकरण खरिद गर्न आवश्यक छैन भनेर तर्क गर्न सकिन्छ। उनि लगभग कुन यन्त्र सबै आधारभूत तत्व समावेश सिर्फ एक कार्ड, छ। confluence प्रतिकूल परिस्थिति मा (शक्ति उपकरण मा surges, चिस्यान ingress, र यति मा। डी) यस्तो प्रविधी मरम्मत विषय छैन।
व्यावसायिक उपकरण को विकल्प
उपकरण (पलटनेवाला) वेल्डिंग चिनियाँ उत्पादन पेशेवर-ग्रेड उपकरण सम्बन्धित हुन सक्छ। यो प्रविधी भारी भार सामना गर्न सक्षम छ, उच्च गुणस्तरीय परिणाम प्रदान गर्दछ।
यस्तो उपकरण चयन जब तपाईं कारक को एक नम्बर ध्यान गर्नु पर्छ। सञ्चालन वर्तमान शक्ति वेल्डेड सामाग्री को मोटाइ अनुसार चुनिएको हुनुपर्छ। थप ध्यान को पेलोड को दर भुक्तान गर्नुपर्छ। यसलाई यन्त्र, साथै चक्र बीच समय अन्तराल को सञ्चालन समय पारस्परिक रहेको छ।
सुरक्षा उपकरण डिग्री सञ्चालन अवस्था मेल गर्नुपर्छ। उच्च धूलो, चिस्यान मा कार्यका लागि, कम्पन कठिन अवस्थामा प्रयोगको लागि अभिप्रेरित Inverters लागू गर्नुपर्छ। उपकरणहरू को शुरू सबैभन्दा वर्ग सबै 380 वी को नेटवर्क जडान आवश्यक
एक सभ्य चिनियाँ वेल्डिंग Inverters छनौट, तपाईं उपकरण को कार्यक्षमता ध्यान गर्नु पर्छ। आवेदन आधारमा, त्यहाँ उपकरणहरू तीन मुख्य समूहहरू छन्। तिनीहरूले घरेलू काम को लागि र व्यावसायिक गतिविधिहरु दुवै प्रयोग गरिन्छ।
पहिलो समूह उपकरणहरू मार्गदर्शन चाप वेल्डिंग (एमएमए) समावेश छन्। दोस्रो समूह अर्धस्वचालित हुन्छन्। यस वर्गमा यस्तो मिग, गुरुत्व रूपमा उपकरणहरू समावेश छ। Argon वेल्डिंग (छूत) को लागि अभिप्रेरित छुट्टै वर्गमा विनियोजन apparatuses मा।
चिनियाँ वेल्डिंग पलटनेवाला को आधारभूत कार्यहरु बाहेक थप मोड हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यो जो काम वर्तमान शक्ति अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ "जबरजस्ती चाप", हुन सक्छ, "Antizalipanie" एक इलेक्ट्रोड समस्या, र यति मा। डी यो समीक्षा मालिकको द्वारा प्रमाणित, सान्त्वना काम सुधार गर्दा बन्द उपकरण स्विच।
प्रदर्शन को उपस्थिति पनि स्वागत, साथै वेल्डिंग विभिन्न मोड बीच स्विच गर्न सक्ने क्षमता छ। यी चिनियाँ वेल्डिंग Inverters सार्वभौमिक उपकरणहरू को कक्षा मा समावेश छन्।
एक उच्च गुणस्तरीय उपकरण खरिद गर्न चाहने, तपाईं निर्माता को विकल्प को लागि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रयोगकर्ता अनुसार, आवश्यक छैन महंगा उपकरण प्रजातिहरू किन्न। यो मापदण्ड चयन मोडेल गुणस्तर ग्यारेन्टी छैन। राम्रो वेल्डिंग पलटनेवाला चिनियाँ उत्पादन एक उचित मूल्य लागि खरिद गर्न सकिन्छ। यो उपकरण गुणस्तर अत्यधिक उत्पादन को मात्रा मा निर्भर छ। ठूला उत्पादन, अधिक स्वीकार्य यो उपकरण एकाइहरु खर्च हुनेछ।
पनि निर्माता को योग्य सेवा केन्द्र को उपलब्धता, मेशिन निर्देशन प्रयोग को साइट, र यति मा फरक। डी गुणस्तर प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। सबै Inverters को 90% आज जारी चीन। पनि रूसी कम्पनीहरु यहाँ यस्तो उपकरण सङ्कलन गर्न रुचाउँदैनन्। श्रृंखला उत्पादन तपाईं प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरु सिर्जना र एक उचित मूल्य मा यसलाई बेच्न अनुमति दिन्छ।
मार्गदर्शन वेल्डिंग लागि Inverters
उपकरण को एक योग्य उदाहरणका चयन गर्न, यो ग्राहक प्रतिक्रिया को आधार मा संकलित चिनियाँ वेल्डिंग Inverters स्तर, विचार गर्न आवश्यक छ। सबै भन्दा राम्रो उपकरणहरू मार्गदर्शन वेल्डिंग लागि को श्रेणी मा यस्तो उपकरणहरू Fubag आईआर 200 (9.5-10 हजार। RUB।), «Svarog» एआरसी 205 रूपमा समावेश (14.5-15 हजार। RUB।)। यो उच्च-गुणस्तर, समय को एकाइहरु परीक्षण गरे।
मास्टर पलटनेवाला Fubag आईआर 200. यो उच्च सञ्चालन वर्तमान (200 ए) द्वारा विशेषता छ जोड। शक्ति को राम्रो आपूर्ति गर्न धन्यवाद, यसको लागि प्रयोग गरिन्छ धातु संरचना, वेल्डिंग5मिमी पाइप काटन इलेक्ट्रोड। उपकरणको दक्षता हुँदा पनि एक घर नेटवर्क मा महत्वपूर्ण भोल्टेज ड्रप कायम छ। त्यहाँ चाप afterburner, antizalipaniya इलेक्ट्रोड, तातो सुरु को एक समारोह छ। यो उपकरण पनि साईट मास्टर लागि उपयुक्त छ।
पलटनेवाला "Svarog» एआरसी 205 अन रूसी ब्रान्ड बनेको छ उत्पादन क्षमता चीन मा बिरूवा को। यो उपकरण पनि Argon वेल्डिंग लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पलटनेवाला अधिकतम वर्तमान उपकरण वेल्डिंग र सकारात्मक प्रतिक्रिया को पर्याप्त अवधि छ 180 ए छ।
सबै भन्दा राम्रो चिनियाँ छनौट मूल्यांकन वेल्डिंग पलटनेवाला खरिद अघि जांच गर्नुपर्ने, यो उल्लेख गर्नुपर्छ Semiautomatic उपकरण वर्ग। यो उपकरणहरू औरोरा Overman 180 (21,5-22 हजार। RUB।), Elitech आईसी 190P समावेश (19-19,5 हजार। RUB।)। वेल्डिंग उपकरण को यस योग्य प्रतिनिधिहरु प्रयोगकर्ता दावी।
अरूणोदय Overman 180 अत्यधिक विश्वसनीय र किफायती लागत छ। यो समग्र आर्थिक छ। वर्तमान-भोल्टेज विशेषताहरु को rigidity कन्फिगर गर्न सक्ने क्षमता संग, पलटनेवाला दुवै पातलो र ठोस वेल्डिंग लागि उपयुक्त छ।
Elitech आईसी 190P साधारण र fluxed तार को सहभागिता संग, वेल्डिंग लागि प्रयोग गरिन्छ। यो तपाईं अवरोध बिना एकदम लामो समय को लागि काम गर्न अनुमति दिन्छ। यसलाई कम बिजुली खपत द्वारा विशेषता छ।
सबै भन्दा राम्रो चिनियाँ वेल्डिंग Inverters छलफल भएको, सबैलाई आफु को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प उपकरण चयन गर्न सक्षम हुनेछ।
निर्मित ग्यास चुलो - आफ्नो भान्सा मा सुविधा र सान्त्वना!
Kipp गरेको उपकरण: मछलीघर लागि एक सरल उपकरण
कुना धातु: गेज। कुना equal- इस्पात: गेज आयाम
स्विमिंग पूल लागि निस्पंदन एकाइ: उपकरण चयन, स्थापना
महिला जिन्स को आयाम: ज्ञान - आधा युद्धमा
जीवनी र Marlene Hutsieva को काम। फिलिमहरु को सूची
Betti Uayt: "आदर्श हजुरआमा फिल्म र टेलिभिजन"
Anisovy tincture या शराब - दुनिया मा सबै भन्दा लोकप्रिय अल्कोहल पेय मध्ये एक
किन युरोप mononational आउन
हर्निया कसरी शरीरका विभिन्न भागहरूमा उपचार गरियो?
खार्किवको बीयर पब: आगन्तुकहरू, ठेगानाहरू, सम्पर्कहरू र मेनूहरूको समीक्षा
कसरी उप lineydzh2खोज्नमै जाने